सल्लाको माथिल्लो जङलबाट सल्लिपिर पन्छाउँदै कम्मरमा आधा पेट ढाक्ने पटुका बाँधेकी एउटी आमा झर्दै छिन् । हातमा लौरो छ । बाटो पहिल्याउने र टेक्ने लौरो । बुढेस्कालको एउटै साहारा भनम् । थाप्लोमा नाम्लोले थिचेको छ । र पिठ्युमा डोकोभरी दाउरा बोकेकी छन् । सुस्त सुस्त हिँड्दै अस्पताल प्राङण हुँदै आउँछिन् । उनी हल्का स्याँ स्याँ गर्दै छिन् । अरुका निम्ती त अझै तगडा नै देखिन्छिन् । उनको उमेर ढल्किँदै गयो । अनुहार चाउरिँदै गयो । उमेर गन्तिले कति पुग्यो, पत्तो छैन। कति माघका चिसा सिरेटाले हाने होलान् उनलाई । हरेक चुनावमा भोट पनि खस्यो उनको कतिपटक । नातीहरु अमेरिका पुगे । छोराहरु राजधानी पुगे । तर उनको भारी कत्ति कम भएन । छुटेन त्यो दाउराको भारी कहिल्यै ।
सल्लिपिरले उनको बाटो सधैं ढाकिदिन्छ । उनी सधैंजस्तो सल्लिपिर हटाउँदै बाटो आँफै बनाउँदै जङलबाट निस्किन्छिन् अस्पताल नजिकै । उनको घर पुग्ने छोटो बाटो परेर मात्रै भने हैन । हिंडेर बनेको बाटो ,तर नक्सामा नरहेको बाटो हो त्यो । सधैं जीवननक्सामा स्पस्ट बाटो नहुन सक्छ । आँफै पहिल्याउन पर्ने हुन्छ । हिंडेर बनाउनुपर्छ । खनेर खोस्रेर बनाउनुपर्छ । तिनी आमाले जस्तै ।
“ ति डाक्तर बाबु आउँदैनन् अब ? कहाँ गए । “ एक डोको भरी दाउराको भारी बोकेकी आमाले भारी नबिसाइ सोध्छिन् । आफ्नो श्वासमा ब्रेक लगाइ-लगाइ भन्छिन् “ मेरो ओक्तो छ कि भनेर बाटो पारेको । “ घाममा बसेर नाम लेख्दै गरेका कर्मचारीले जबाफ दिन्छन् ,” उहाँ त गइ जानुभो । अब आउनुहुन्न । पढ्न जानुभयो । .......अर्का डाक्तर आउनुभाछ । भित्र हुनुन्छ । “
एउटा कुनामा भारी बिसाउँछिन् ति आमाले । अनी पुर्जा कटाउँछिन् मंगलवारको दिन परेकोले । र भित्र पस्छिन् । उनलाई मंगलवार लिएको ओक्तोले मात्रै काम गर्छ भन्ने विश्वाशको जरो मनमस्तिष्कमा गहिरो छ । उनलाई एउटा खोकीको औषधी लिनपर्छ बेलाबेलामा । “ नयाँ रहिछन् डाक्तर त । त्यो ओक्तो नै थाहा पाएनन् । “ भुसा ” छोड्ने अर्ती मात्रै दिने नानीहरु............ ! “ लामो सुस्केरा हाल्दै भारी बोक्छिन् । त्यही बेलामा उनको पटुकाभित्र लुकाइराखेको एउटा सिगरेट खस्छ । पातमा बेरिएको सिगरेट । भारी बिसाएपछि सल्काउने पालो थियो होला त्यसको ।
सानैदेखि नफरत रोपिएको थियो चुरोट प्रति मेरो मनमा । त्यसको गन्ध पनि सहन मुस्किल । चुरोट त बिष पो हो । हरेक क्षण आयु कम गरिरहेको हुन्छ । क्यान्सरजन्य रोगको प्रमुख कारक तत्व चुरोट । चुरोटको बद्ख्वाँइ जति गरे पनि कम हुन्न होला । तर अचम्मको कुरा । उत्पादन भने कहिल्यै नरोकिने ! जानिजानी बिषको उत्पादन सधैं ।क्यान्सर बाँड्ने तर चुरोट खान हुन्न चाँहि भन्ने । कर जति लागेपनि खपतमा कत्ती कम नहुने कस्तो बिशेष जिनिस रहेछ चुरोट !
चुरोट एक खिल्ली बाट दुई तीन हुँदै कति हुने केही भर हुँदैन । एक पछि अर्को सल्किन्छ । चुरोटको साथी सलाई पनि गजक्क हुँदो हो । नशा सकिएपछि तलतल लागिरहने । निकोटिन जब रगतमा पुग्छ र दिमागको “प्लेजर” सेन्टरमा हिट गर्छ । तब त्यसको नशा लाग्छ । चुरोट उपहार दिएर महाराजाहरुलाइ खुशी पारेका कथा कथामात्रै हैन रहेछन् । चुरोटको पावर बिचित्र रहेछ । सबै एक खिल्ली चुरोटको कमाल । क्यान्सर हुने डरभन्दा निकोटिनको प्लेजरको प्रभाव बढी हुने ।
चुरोट नहुँदो हो त मान्छे के गर्दा हुन ! त्यही चुरोटमा हुने पदार्थलाई पातमा राखेर खान्थे होला । पहिले पहिले चिटिक्क परेको फिल्टर भएको सिगरेट कहाँ आउथ्यो र? त्यहिपनि पातमा मोलेर भएपनि खान्थे । तिनै आमाले खाएजस्तै ।
सदाजस्तै ओपिडी सकिएपछी चौरमा निस्किएको थिएँ म । माघको महिना थियो। बिरामी छिट्पुट आउने मौसम थियो त्यो । तिनै बुढी आमै एक भारी दाउरा जङलबाट बटुलेर चौरबाट हिड्दै थिन् । बेलाबेला ओक्तो लिन आउने रहिछन् त्यो बाटो । घरको दुरी पनि नजिक नै पर्दो होला । खोकीको ओक्तो रहिछ उनलाई चाहिने । त्यो पनि मंगलवारको दिन । त्यो सिरप औषधी बच्चाको लागि सरकारी सप्लाई हुन्थ्यो। तर उनलाई भने त्यही झोल नै चाहिने । नत्र ओक्तो नलाग्ने रे ! बसुन्जेल स्ट्कमा राखेर भएपनि उनको लागि सधैं उपलब्ध गराइराखेँ मैले । उनले दाउराको भारी बोकेको सधैंजस्तो देखिरहेको थिएँ । मनमा प्रश्न उब्जिएको थियो। । “कति बर्षकी आमा होलिन् ?”
एक दिन सोधिहालेँ ” आमै । डोको त बडेमानको छ । उस्तै भारी दाउरा । कती बर्षकी हुनुभयो ? “
“ चार बीसमा तीन बढी भयो बाबु । नयाँ डाक्टर बाबु जस्तो छ नि अस्पतालाँ । ,“ मुस्कानसहित यति भनेर आफ्नो बाटो लागिन् ।
नजिकैको परिसरभित्रको चियाचमेना खाने ठाउँमा तिनै आमा एक दिन सिगरेट पिउँदै थिन् । उही पातमा बेरेर बनाएको सिगरेट । उनी सार्है आनन्द मानेर पिउँदै थिन् । हामीलाई देखेर होला अप्ठेरो मानेर लुकाउन खोजिन् । “ आमै लुकाउन पर्दैन । मैले देखिसकेँ । हाम्ची ,अब १० हजार जरिवाना लाग्ने भओ । “ हाँस्दै भनेँ । स्वास्थ्यकेन्द्रको बोर्डमा प्रष्टसँग टाँसिएको नियम पो हो त ।
उनी पनि मुख छोप्दै हाँसिन् । र भनिन् “ कहाँ हुन्थ्यो र ल्याउने हो १० वटा हजार । खेला गर्नुन्छ बाबु । कहाँ .......“
“यो भुसा छोड्नुभयो भने राम्रो होला । खोकी पनि लाग्दैन । धेरै बाँचिन्छ । “ मैले उनको बोली खस्न नपाउँदै भनेँ ।
ठुलो हाँसो हाँस्दै निसंकोच भनिन् “ बाबु । पहिलेका डाक्तर बाबुले पनि त्यही भन्थे । म त छोड्न सक्दैन । अली बढी बचेँर चुरोट खाँदाखाँदै मर्ने उपाय् भए भन्नु । चुरोट छोडेर त म बाँच्दिन । जिउने उमेर बाँचिसकेँ । अब केही बाँकी छैन। भुसामा त मेरो खुशी छ् । रहर नै त्यही हो । “ उनका ओठका किनार फिजारिन्थ्यो ।
“ फिल्टर भएको पिउनुपर्छ त आमै । यस्तो भुस भरेर पातमा बेरेर नि खान्छन त । “ म भन्छु मायाका साथ । फिल्टरले हानी केही कम होला कि भन्ने झिनो आशमा । उनले छोड्ने आश त देखिँदैनथ्यो ।
“ रुपैया चाहियो नि बाबु त्यस्तो चुरोटलाई त । फ्री मा कल्ले दिन्छ र ? येही ठीक छ मलाई त “ भन्दै मुसुक्क हाँस्छिन् । कति मिठो मुस्कान । द्वेषरहित मुस्कान । र एक लामो सर्को तान्छिन् आनन्द मानी । धुवा उडाउँछिन् ओठ खुम्च्याइ ।
ति आमैको रहर देखेर मलाई पो इर्ष्या लाग्यो । कति खुशी हुन सकेकी । त्यस्तो ढल्किँदो उमेरमा भारी बोकेर तल माथि गर्छिन् । मुस्कुराउँदा अनुहारका मुजा परेका छाला एक साथ फिँजारिन्छन् । नाकमा झुन्डिएको बुलाकी पनि गर्वसाथ गजक्क परेजस्तो प्रतित हुन्छ । । दु:खको कत्ती लेस मानेको देखिँदैन। उनलाई आफ्नो उमेरको जोड सम्म धौ धौ हुन्छ । मलाई भने त्यो सानो ठाउँमा कति छिटो पट्यार लागिसकेको थियो । दुई महिना नबित्दै । कहिले भागुम् जस्तो भइसकेको थियो त्यहाँका अभावहरुको साङ्लोबाट ।
उनको रहर नै चुरोट पिउने । सारा उमेर त्यही गाउँमा सकिएको पत्तै भएन उनलाई । मलाई भने किन हो उनको रहर पूरा गर्न अनायास मन लाग्यो । डाक्टरको धर्मले त फिटिक्कै दिँदैन । त्यही पनि मैले एक खिल्ली सबभन्दा राम्रो ब्रान्डको चुरोट र एक कप चिया अर्डर गरिदिएँ । र भनेँ ” कसैलाई नभन्नु है । “ उनी अलिकत संकोच मान्दै लिइन् ।
मैले किनेको पहिलो चुरोटको खिल्ली थियो त्यो । उनी भने रहर मान्दै त्यो चुरोट सकिन्जेल तानिराखिन् । म हेरिरहेँ । बोर्डमा टासिएको नियम बोर्डमै रहुन् । बरु सिगरेट बनाउनेलाई जरिवाना लगाउनुपर्ने । खुलेआम क्यान्सर बाँड्नेलाई जरिवाना लगाउनुपर्ने ।
उनका जीवनका कयौँ इच्छाहरु त्यही धुवामा रुमलिँदै उडेको महसुस गर्दै थिएँ । उनले त्यही धुवासंगै आफ्ना कति आशाहरु धमिलिएको देखिहोलिन् । । धुवामा नै आफ्ना मनका गुनगुनको बिस्कुन सुकाइहोलिन् । आफ्ना कथाब्यथालाई चुरोटको धुवामा अक्षर बनाइ रचेकी होलिन् । प्रत्येक सर्को सँगै उमेर सेकेन्ड मिनेट गर्दै घट्दै गएको बैज्ञानिक तथ्य पनि महसुस गर्दै थिएँ । सोच्दै थिएँ । तर पनि उनको उमेर कम गर्ने तागत त्यो धुवाँमा थिएन सायद ।
उनको साथी भने पनि दुस्मन भने पनि त्यही धुवा । उनका कथाहरु अचेल “ओल्डफेसन “ भैसकेछन् । नातिनातिनाहरु एडभान्स भइसके । बिचरा ति आमालाई के थाहा ! सबै मोबाइल ,टि भि ,युट्युब आदिमा मस्त र ब्यस्त । कसलाई पो रहर होला सल्लिपिर पन्छाएर अगेनोको जोहो गरेको कथा । नाम्लोले थाप्लोमा बनाएको बाटो हेर्ने रहर कसलाई होला र । न त डोकोले कति भारी दाउरा बोक्यो भन्ने कथा सुन्न आतुर होला कोही ! नकहलिएका कहानीहरुमा शब्द भरिदिने को भेटिएला र ? त्यसैले धुवा त छ सधैंको एक मात्रै सङिनी । मनमनै भनेँ ”, तिमी “ओल्डफेसन” भएछौ आमै ! तिमी ” आउट्डेटेड ” भइछौ ! “
उनको मुस्कान बेजोड थियो। । आत्मादेखि उद्भव भएको मुस्कान । फोटोमा कैद गरे शताब्दीको उत्कृष्ट फोटोबाट सम्मानित हुन्थ्यो होला । जसको जति मुस्कान गहिरो र निस्चल प्रतीत हुन्छ उसले त्यती नै गहिरो दु:ख भोगेको हुन्छ । सुखसयलले मात्र कृत्रिमताको जन्म दिन्छ । दु:खबोधले त नयाँ काँचुली फेरेको मनुष्य निर्माण गर्छ । त्यसमा कृत्रिमताको लेस रहँदैन । झुसिल्किराबाट पुतली राम्रो र सुन्दर बनेजस्तै । त्यस्तै संघर्षबाट जन्मिएको हाँसेको ओठ ,आँखा र चाउरिएका अनुहार सुन्दर देखिन्छ । प्राकृतिक देखिन्छ । पवित्र देखिन्छ । नपत्याए एक पटक नेल्सन मन्डेला ,मदर टेरेसा बिबेकानन्द, फ्लोरेन्सको तस्बिरहरु नियाल्ने कि ।
ठीक गरे कि बेठीक गरेँ त्यो मलाई थाहा भएन । आज पनि ति आमाले मुसुक्क हाँस्दै खुशी हुँदै सम्झिन्छिन् रे “ पहिलेका डाक्तर बाबुले मलाई एक खिल्ली चुरोट दिएका थे। ....... “
मैले किनेको त्यो पहिलो खिल्ली चुरोट नै उनले आफ्नो अन्तिम खिल्ली मानेर सदालाई परित्याग गरिदिएको भए म खुशी हुन्थेँ होला ।
र बेलाबेलामा सोच्छु ” के त्यो भारी अचेल कम भए होला त ? “
Dr Laxmi Panthy April 5, 2020 at 5:58 AM
मान्छेलाइ परिबर्तन गराउन चाहनास्वरुप "कसैलाई नभन्नु है" भनी दिनुभएको उपहारले ती आमाको बानी सुधार आहोस।🙏 रार्मो लेख।
Lanahksham April 6, 2020 at 4:45 AM
Dr. Upama March 14, 2022 at 8:14 AM
Shambhu March 14, 2022 at 5:53 PM
आमाको उपचार गर्न लुम्बिनि प्रादेशिक अस्पताल आउँदा तपाईको सल्लाह सुझाव मन पर्यो, तपाईको नाम टिकटको हस्ताक्षरमा र थर ढोका छेउमा हेरें, "डाक्टर शम्भु कुन फार्मेसीमा बस्नुहुन्छ दिदी? "बाहिर पालो पर्खाउने दिदिलाई सोधें। "खोइ मलाईनी थाहा छैन! "दिदिले भन्नूभो। अनि फेसबूकमा खोज्दा तपाईको वेबसाइट देखेर हेरेको यति राम्रा लेख हरु देख्न पाइयो। सुनमा सुगन्ध भेटियो, अन्तर्बार्ता पनि हेरें। सर 😅 त्यो तपाईले किनेर चुरोट खुवाउनुभको बुढी आमा प्युठान या गुल्मिकी होलिन, अहिले बुट्वलमा तपाईलाई यस्तो घटना नियाल्ने र सब्दहरुलाई क्रम्बद्धगर्ने फुर्सद कहाँहोला र? आखिर जिल्ला देखि प्रदेश तपाईपनी पुग्नुभयो। त्यो बुढीआमाको छोरा सरह।
Lanahksham March 18, 2022 at 8:49 AM
धन्यवाद । अझै पनि नियालिरहेको हुन्छु । नया नया आउछन् कहिलेकसो ।